Umhobe 86 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Umthandazo kaDavide. Thoba indlebe yakho, Yehova,ndiphendule, Ngokuba ndilusizana, ndilihlwempu.
Wugcine umphefumlo wam, ngokuba ndingowenceba; Msindise,wena Thixo wam, umkhonzi wakho, Lo ukholose ngawe.
Wuvuyise umphefumlo womkhonzi wakho, Ngokuba umphefumlo wam ndiwuphakamisela kuwe, Nkosi yam;
Ngokuba ulungile wena, Nkosi yam, uxolela; Umkhulu ngenceba kubo bonke abakunqulayo.
Ngemini yokubandezelwa kwam ndinqula wena, Ngokuba uya kundiphendula.
Akukho unjengawe, Nkosi yam, phakathi koothixo; Akukho zenzo zinjengezakho.
Zonke iintlanga owazenzayo ziya kuza ziqubude phambi kwakho, Nkosi yam, Zizukise igama lakho.
Ngokuba umkhulu, wenza imisebenzi ebalulekileyo, UnguThixo wena wedwa.
Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndihambe ngenyaniso yakho; Yibandakanye intliziyo yam ukuba ndiloyike igama lakho.
Ndiya kubulela kuwe, Nkosi yam, Thixo wam, ngentliziyo yonke, Ndilizukise igama lakho ngonaphakade:
Ngokuba inceba yakho ibe inkulu kum; Wawuhlangula umphefumlo wam kwelingaphantsi labafileyo.
Thixo, abakhukhumali basukele phezulu kum; Ibandla labanobungqwangangqwili lifuna umphefumlo wam; Abakumisi wena phambi kwabo.
Ke wena, Nkosi yam, unguThixo onemfesane, onobabalo, Ozeka kade umsindo, omkhulu ngenceba nenyaniso.
Ndibheke, undibabale; Mphe amandla akho umkhonzi wakho,Umsindise unyana womkhonzazana wakho.
Ndenzele umqondiso wokulungileyo, Bawubone abandithiyayo,badane, Kuba wena, Yehova, undincedile, wandithuthuzela.